ခြေထောက်နာတာကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ - Hello Sayarwon
ခြေထောက်နာခြင်း ဆိုတာ သင့်ခြေချောင်းတွေရဲ့ အရိုးဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ ဒါကသင့်ကို နာကျင်စေရုံသာမက ထုံကျင်မှုကိုလည်း ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
Bunion (ခြေထောက်နာကျင်မှု) ဆိုတာဘာလဲ။
Bunion ဆိုတာ သူ့ခြေမရဲ့ အရင်းပိုင်းမှာ ဖြစ်တဲ့ အရိုးနာကျင်မှုတစ်ခုပါ။ ပထမဆုံး ခြေဖဝါးရိုးနဲ့ ဆက်နေတဲ့နေရာပါ။ bunion ဖြစ်တဲ့အခါ သင့်ဒုတိယခြေချောင်းကို ခြေမက အလွန်အမင်း ထိုးနေပါလိမ့်မယ်။ bunion ဆိုတာ တစ်သျှူးအနုရော အရိုးပါ ၂မျိုးလုံး ပုံပျက်ခြင်း အမျိုးအစားတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Bunion ဖြစ်ရင် နာကျင်မှုကို အတော် ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ သေးလွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးလွန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် သင်နဲ့ ကောင်းကောင်းမတော်တဲ့ ဖိနပ်တွေကို စီးတာက bunion ဖြစ်စေတဲ့ အဓိကအကြောင်းအရင်းတွေထဲက တစ်ခုပါ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကတော့ pressure-response effect ကို ခံစားရတာပါပဲ။ အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက် ပိုအဖြစ်များတယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
Bunion မဖြစ်အောင် ရှောင်လို့ရတဲ့ နည်းလမ်းရှိလား။
Bunion ဖြစ်နိုင်ချေ လျှော့ချဖို့ ကောင်းကောင်းမတော်တဲ့ ဖိနပ်ကျပ်ကျပ်တွေ အတင်းမရ ရအောင် မစီးပါနဲ့။
ဖိနပ်ရောင်းတဲ့သူကို သင့်ခြေဖဝါးရဲ့ အကြီးဆုံးအရွယ်အစားနဲ့ တော်မယ့် ဖိနပ်ကို မေးမြန်းပါ။ များသောအားဖြင့် သင့်ခြေဖမိုးရဲ့ ဖိအားနဲ့ ပြန့်ကားမှုကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
၂လက်မထက်မြင့်တဲ့ ထိပ်တို၊ အချွန်၊ အကျပ် ဖိနပ်တွေစီးခြင်းကို ရှောင်ပါ။ သင်ဖိနပ်စီးထားတဲ့အချိန်မှာ သင့်ခြေချောင်းတွေက တွန့်ခေါက်နေပါလိမ့်မယ်။
တပြေးညီ မြင့်တဲ့ ဖိနပ်ကို စီးတာကလဲ အဖြေမှန်မဟုတ်ပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဒေါက်ကိုက ဖိအား အများကြီးပေးလို့ပါ။ ဒါကြောင့် ၁/၄ သို့မဟုတ် ၁/၂ လက်မလောက် စောင်းထားတဲ့ ဖိနပ်ကို စီးပါ။
အိမ်ထဲမှာ ခြေဗလာနဲ့ သွားလာပါ။
သင့်ခြေဖဝါးတွေကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ ခြေညှပ်၊ နောက်ပိတ်၊ ကြိုးသိုင်း စတဲ့ ဖိနပ်တွေ စီးမယ့်အစား ခြေဗလာနဲ့ အချိန်များများ သွားလာတာခြင်းဖြင့် သင့်ခြေဖဝါးတွေ သက်တောင့်သက်သာ ဖြစ်ပါစေ။ ခြေဗလာနဲ့ သွားလာတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ သင့်ခြေချောင်းတွေ သန်မာလာမယ်၊ ခြေဖဝါးတွေ ပြန့်ကားလာမယ်၊ ဟန်ချက်ညီမှု တိုးတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ခြေဗလာနဲ့ သွားလာတာက ခြေမကို အလုပ်ပိုလုပ်စေတာတင်မကပဲ အရွတ်နဲ့ အကြောတွေကိုလဲ ပိုသန်မာအောင် ကူညီပေးပြီး bunion ဖြစ်နိုင်ချေကို လျှော့ချပေးပါတယ်။
http://www.wikihow.com/Avoid-Getting-Bunions. Accessed January 15, 2017
Bunions – Prevention
http://www.webmd.com/a-to-z-guides/tc/bunions-prevention. Accessed January 15, 2017